Google na Facebook na Nzuzo | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 10, 2011 Wednesday, November 9, 2011 Douglas Karr
Na mgbasa ozi ọdịnala, nke a bụ akara mgbe niile na-agaghị agafe. Ekwesighi ka ndi mgbasa ozi metụta akụkọ ma ọ bụ n'otu aka ahụ. N'ime ogbe ọdịda anyanwụ nke anyị hụrụ onwe anyị, tebụl agbanyela ma Golayat ndị a na-achịkwa ọdịnaya na mgbasa ozi.Veracode enyela Infographic a na otu ha abụọ si atụle ma a bịa n'ihe gbasara nchekwa na nzuzo:
Nche Veracode Ngwa anapụta akpaghị aka, ígwé ojii dabeere vulnerability nchọpụta n'elu ikpo okwu na-egosipụta nche flaws na koodu ngwa. Enweghị ihe ọ bụla iji wụnye ma ọ bụ hazie? Nke pụtara na ị nwere ike ịmalite nyocha na mmezigharị ntụpọ taa.
Tinye Njikọ Njikọ na WordPress Template gị